नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस प्रकार रहेको छ – Khabar Silo
काठमाडौं। नेपाली बजारमा साताको पहिलो दिन आज (आइतबार) अमेरिकी डलरसहित केही देशको भाउ घटेको छ भने प्राय देशको भाउ स्थिर रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दर अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११३ रुपैयाँ ५३ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ११४ रुपैयाँ १३ पैसा रहेको छ ।
त्यस्तै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १४६ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रिदर १४६ रुपैयाँ ९५ पैसा रहेको छ । युएई दिराम एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ९१ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ७ पैसा रहेको छ ।
साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ २७ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ४३ पैसा रहेको छ । त्यस्तै कतारी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ १८ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ३५ पैसा रहेको छ ।
काठमाडौँ । साताको छैटौँ दिन अर्थात आज सोमबार पनि नेपाली बजारमा सुनको भाउ घटेको छ। हिजो आइतबार प्रतितोला ५ सय रुपैयाँले घटेको सुनको भाउ आज पनि प्रतितोला ६ सय रुपैयाँले घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। महासंघका अनुसार, आज छापावाल सुन प्रतितोला ८९ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। छापावाल सुन बिहीबार प्रतितोला ८९ हजार […]
सुन चाँदी किन्दै हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् कति छ आजको मूल्य ?
काठमाडौं। साताको अन्तिम कारोबारको दिन शुक्रबार सुनको मूल्य ३ सय रुपैयाँ बढेको छ। आज सुन तोलामा ३ सय रुपैयाँले बढेर ८९ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यसअघि बिहीबार सुन ८९ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै शुक्रबार चाँदी तोलामा ५ रुपैयाँले घटेको छ। यस दिन […]
मैले सोनिकालाई असल मित्रको नाताले चुप्पा गरेँ : दिलनिशानी मगर